World News – Somali Mail
Home WARARKA World News
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu u dilay hogaamiyihii sare ee milateriga Iiraan, Qaasim Sulaymaani, si “uu u joojiyo dagaal, ee uusan doonayn inuu mid bilaabo”. Waxa uu sheegay in uu “dhammaaday waqtigii argaxa ee Sulaymaani” kaddib markii Jimcihii lagu dilay weerrar dhanka cirka ah oo ka dhacay…
Dowladda Mareykanka ayaa fulisay weerar dhaawac xooggan gaarsiiyey Iran, ayada hoggaamiyihii ciidamada xulka ah ee Qudus ee dalkaas ku dushay duqeyn ka dhacday dalka Iraq. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in Jeneral Qassem Soleimani lagu dilay weerar dhacay goor dambe oo khamiistii ah kadib amar…
Sida ay qortay warbaahinta dowladda Canada ee CBC, canuggii ugu horreeyay ee ku dhashay magaalada Toronto, ilbiriqsigii ugu horreeyay ee 2020 wuxuu noqday Soomaali. Wuxuu ku dhashay cisbitaalka Humber River Hospital ee magaalada, wuxuuna dhashay markii saacadu ay ahayd 00:00 (12:00) ee sannadka cusub. Wiilkaa dhashay waxaa loo bixiyay, Amiir…
Turkiga oo ansixiyey in ciidamo la geeyo Libya
Baarlamanka Turkiga ayaa maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in xukuumadda ay ciidamo gayso dalka Libya, si ay u taageeraan dowladda QM ay taageerto ee Tripoli. Dowladda Tripoli ayaa tan iyo bishii April wajahaysay weeraro joogto ah oo kaga imanayey Jeneral Khalifa Haftar, oo ay taageeraan dalalka Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta iyo…
Kenya oo Jabuuti kaga adkaatay loolankii xubunnimada golaha ammaanka
Somali Mail August 21, 2019
Ururka Midowga Afrika ayaa taageeray musharaxnimada Kenya ee ka mid noqoshada xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee QM, kadib codeyn maanta uu qaaday ururuka oo ka dhacday xaruntiisa magaalada Addis-Ababa. Kenya ayaa waxa ay ka adkaatay Jabuuti oo ay kursigan ku loolameen, ayada oo heshay 37 cod, halka…
Faahfaahin:Abiy ahmed oo tuute xiran shacabka kala hadlay Cinqilaabki Xalay
SM Staff June 23, 2019
Ethiopia – Waxaa mar qura wadanku galay xaalad degdeg kadib marki wadanka ka dhacay Cinqilaab Fashilmay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed oo xiran tuutaha Millatary ga ayaa saqdi dhexe ee Xalay Si live ah uga soo muuqday tvga dalkaasi. Raysal wasasraha ayaa si adag u cambaareeyay cinqilaab uu ku…
Atoorihii xiddiga ka ahaa filimkii laga daba dhacay ee la magac baxay Game Of Thrones oo walwal soo wajahay
SM Staff June 1, 2019
Atoorihii xiddiga ka ahaa filimkii laga daba dhacay ee la magac baxay Game Of Thrones, Kit Harington ayaa tallaabo u qaaday inuu “tijaabo caafimaad isku sameeyo”, waxaana lagu soo warramay inuu soo wajahay walwal xoog leh iyo culeys dhinaca maskaxda ah. Harington oo dhawaan soo gaba gabeeyay filimka lagu tilmaamay…
Dagaal Ay ku dhinteen 40 maxaabiis oo ka dhacay Dalka Brazil
Somali Mail May 28, 2019
Dowlada Brazil ayaa sheegtay in ugu yaraan 40 maxbuus ay ku dhinteen Isniintii shalay xabsi ku yaal magaalada Manaus. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu dabo-socday dagaalo horey uga dhex dhacay xabsiyo kale oo dalkaasi ku yaal oo u dhaxeeya kooxo burcad ah, xiisadan oo kusii fiday xabsiyo kala duwan. Inta…
In ka badan 100 ruux oo lagu dilay Qaraxyo ismiidaamin ka dhacay dalka Sri Lanka
Somali Mail April 21, 2019
Ku dhowaad 156 ruux ayaa lagu dilay qaraxyo ismiidaamin ah oo lagu qaaday kaniisado iyo Hotelo ku yaala dalka Sri Lanka, iyadoo qaraxyo ay ahaayeen lix qarax oo is xig xigay. In ka badan 500 oo ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxyada oo ahaa ismiidaamin, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha…
Diyaaradda Ethiopian Airlines oo duulimaad ku ahayd Nayroobi oo burburtey
Somali Mail March 10, 2019
Diyaarada Ethiopian Airlines nooceedu yahay Boeing 737 oo ku socotey Nayroobi subaxnimadan Axadda ayaa burburtey sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska raysal wasaaraha, Sidoo kalde waxaa war rasmi ah soo saartey shirkadda Ethiopian Airlines Dowladda Itoobiya ayaan weli faahfaahin soo saarin. War ka soo abxay shirkadda duulimaadka ee…